Wondershare Ọma Ahịa Akụkọ - Ileba Studies
All Ajụjụ / Comments bụ Welcome
N'ihi na ihe karịrị afọ 3, Wondershare Co., Ltd emeworo a ogologo oge enyi na enyi imekọ ihe ọnụ mmekọrịta KiBAN International Co., Ltd. Wondershare Mepụtara usoro nke ọkachamara courseware authoring ngwaọrụ nke incorporating n'ime KiBAN International si Learning management usoro, nke utịp ke keukwu E-amụta ngwọta. Nke a e-amụta ụlọ e imezu choro Japanese ọrụ si nkụzi Corporation trainers, ịbịaru na mmata nke ọtụtụ ama ụlọ ọrụ dị ka Ricoh onye-emecha ghọọ anyị-eguzosi ike n'ihe ahịa.
Dị ka ma ọzọ na-raara nye E-ịmụta ịdọ aka ná ntị, anyị akpọrọ mkpa nke collaborative arụmọrụ management na ngwaahịa mmepe oge, mgbe nile mkpara mgbanwe iji melite kwụsie ike, nnabata na ikike nke E-mmụta software.
Tinyere na-adịbeghị anya ngwaahịa ịrịba upgrades na ndọtị na mobile mmụta uzo site gbapụ akpan iji mobile software Suite, na imekọ ihe ọnụ n'etiti Wondershare na KiBAN International gosi ihe ịga nke ọma ga na-arụ ọrụ na-enye elu-klas software Japanese ahịa.
TRG, obere maka "The Resource Group", ejisie na-arụ ọrụ ọtụtụ oku emmepe gafee asaa mba. TRG Ahịa Solutions (n'oge Telespectrum) na-enye telemarketing, ahịa na-elekọta, na nka na ụzụ ọrụ nkwado ka "uba" 500 ụlọ ọrụ dị na ego ọrụ, mkpuchi, ọgwụ, telekomunikashions, na ịba uru ọrụ, n'etiti ndị ọzọ.
Mgbe TRG kpebiri inwale QuizCreator, na aka na nduzi, TRG melite QuizCreator na ihe ịga nke ọma bipụtara nnwale maka ule nzube ya, na mgbe ahụ, ha lekwasịrị anya na akuko ikike nke Quiz Management System, nyocha results nsuso na akuko ọrụ. Nke a bụ ihe kasị mkpa chọrọ na ha setịpụụrụ ihe ntule ngwá ọrụ n'ihi na ha dị mkpa iji soro niile ntule results niile trainees mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Ọnwa atọ mgbe zuo nke QuizCreator na Quiz Management System, e nwere ndidi 2461 trainees na dechara nnwale. 26 nnwale na TRG n'ikedo Standards Ule e mepụtara bipụtara na Quiz Management System ọma ruo online ule. Ha belatara oge maka N'ezie mmepe na nnyefe pụtara mgbe zọpụta a nnukwu ego na ọzụzụ.
Ọtụtụ puku ndị ọrụ onwere a ìgwè ndị ọzụzụ azụmahịa, ọha na onwe ụlọ akwụkwọ, ọkachamara azụmahịa, IT ụlọ ọrụ, ọchịchị na na na-eji Wondershare QuizCreator dị ka àgwà online ntule ngwọta maka anapụta ọzụzụ na-emepe emepe na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-amụ arụmọrụ ugbu kpukpru usen-eri na shortening ọzụzụ oge . Ma anyị nwere obi ụtọ na-akpọ aha a ụwa na-mara ụlọ ọrụ n'etiti ha ebe a maka na-ekere òkè ahụmahụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe omenala enterprise ngwọta maka gị ụlọ ọrụ na Wondershare QuizCreator na Quiz Management System, biko na-eche free kpọtụrụ anyị.
Flo Rida feat Consumer Care
Arkansas Department nke Education
Mma Business Bureaus